Interviewမှာ "လုံးဝ" မမေးသင့်တဲ့ မေးခွန်း (၅) ခု - JobExpress Myanmar
“အဲ့တော့ ဘာမေးစရာရှိဦးမလဲ” ဒီမေးခွန်းကို Interviewer တိုင်းလိုလိုက Interview အဆုံးသတ်မှာ မေးလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါက Job Descriptionနဲ့ Companyရဲ့ သင့်ပေါ် ထားတဲ့ Expectationကို ပိုသိအောင် လုပ်ဖို့အခွင့်ကောင်းပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ သင်မေးတဲ့ မေးခွန်းတွေပေါ်မှာ Interviewerက အမှတ်ပေးနေဦးမှာ ကိုတော့ သတိရှိဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ ဒီတစ်ခါမှာ ဘယ်လိုမေးခွန်းတွေကို ရှောင်ရမယ်ဆိုတာကို ပြောပြသွားပါမယ်။ အရင်ကရေးခဲ့တဲ့ ” Interview ကို ဘယ်လိုအကောင်းဆုံး ဖြေမလဲ” ဆိုတာကို Link ကနေ ဆက်ဖတ်သွားလို့ရပါတယ်။
(၁) Salary or Benefit တွေက ဘယ်လိုရှိလဲ ?
Salary and benefit negotiation ဆိုတာ company ဘက်က အလုပ် Offer လုပ်လာပြီးမှ ဆွေးနွေးသင့်တာပါ။‌ နောက်တစ်ခုက သိထားသင့်တာက Interview ဆိုတာ သင့်ကိုယ်သင် ရောင်းတာပါပဲ။ အဲ့တော့ သင့်ကိုကြိုက်တယ်၊ ဝယ်မယ် မပြောသ၍ စျေးစကား မပြောပါနဲ့။ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်လဲ အခြားသူတွေကို Interview လုပ်တဲ့ အချိန် Salary အကြောင်း မေးလာရင် သိပ်သဘောမတွေ့တော့ပါဘူး။
(၂) ဘယ်တော့ဆို Promotion ရှိနိုင်မလဲ ?
ခုလိုမေးလိုက်တာက ယခုလျှောက်ထားတဲ့ Position အပေါ် မှာစိတ်ဝင်စားမှု နည်းတာ ကိုဖော်ပြ လိုက်ပြီး၊ Promotion ဖြစ်ဖို့ကိုသာ စောင့်နေမယ့်သဘောဖြစ်သွားပါတယ်။ ” ဒီမှာ အလုပ်လုပ်နေရင်း ဘယ်လိုတိုးတက် သွားဖို့ အခွင့်‌ရေးတွေ ရှိနိုင်မလဲ ” လို့ မေးတာက ပိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။
(၃) Company ကဘာလုပ်တာလဲ ?
အဆိုးဝါးဆုံး မေးခွန်းပါပဲ။ တချို့တွေ Interview သာလာဖြေတယ်၊ ကိုယ်လာဖြေတဲ့ Company အကြောင်းသေချာ လေ့မလာ ကျတာတွေ့ရပါတယ်။ အနည်းဆုံးတော့ Company နဲ့ ကိုယ်လျှောက်တဲ့ Position (Job Description ) ကိုသေချာသိထားဖို့လိုပါတယ်။ ဒီမေးခွန်းက သင်ရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှု မရှိတာကို ဖော်ပြနေပါတယ်။
(၄) Off days and Holidays တွေက ဘယ်လိုခံစားခွင့်ရှိလဲ ?
ဒီမေးခွန်းကလဲ သင့်ကို အလုပ် Offer လုပ်မှ မေးသင့်တဲ့မေးခွန်းပါ။ ဒီအလုပ် ဒီ Company မှာတကယ် အလုပ်လိုချင်လို့ လာတဲ့သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒါက အရေးအရမ်း မကြီးလှပါဘူး။
“ညီမ က အိမ်နဲ့ ဝေးတော့ အလုပ်နောက်ကျလို့ရလား” ကျွန်တော် ပြန်ဖြေချင်တာကတော့ အိမ်နဲ့အလုပ် ဝေးရင် စောစောထပါ။
အခြား မမေးသင့်တဲ့တာလေးတွေလဲ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
အလုပ်ကို ကလေးခေါ် လာလို့ရလား
Warning ဘယ်နှစ်ခါထိရင်ရင် အလုပ်ထုတ်ခံရမှာလဲ
ကိုယ်ပိုင် အလုပ်ခန်းနဲ့ လုပ်ရမှာလား
Facebook (Social Media) add ချင်လို့ရလား
အထက်ပါ အချက်လေးတွေကနေ Interview မှာ မမေးသင့်တဲ့ မေးခွန်းလေးတွေကို သိရှိနိုင်စေရန် ကျွန်‌တော်တို့ JobExpress Myanmar ကနေဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Content By Ko Min Thent Lwin